I-China Quality USB Cable Manufacturer, Ifektri - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-USB
I-Connexions ingumkhiqizi wekhebula onolwazi lwe-17year. Le USB3.1 Type-C Male to Male Cable ishaja amadivayisi akho e-PD ne-USB-C kanye nokuvumelanisa izithombe, umculo nedatha kuma-laptops. Kokubili iGoogle ne-Apple bamukele Isixhumi Sohlobo C njengesilinganiso sabo esisha kuwo wonke amadivayisi wabo weselula afaka ama-laptops. Kunezizathu eziningi zokuthi lesi sixhumi samukelwe njengoba sinjalo.
Ikesi eliyingqayizivele le-aluminium alloy elinesixhumi esiqinisiwe limelana ne-10,000+ bend kanye ne-10000+ plugging and unplugging test. Ikhebuli iyahambisana ne-2018/2017/2016 MacBook Pro, i-iPad Pro 2018, iMac 2017, iMacBook 2017/2016/2015, iSurface Book 2 , I-Pixelbook, i-Galaxy Book, i-Samsung Galaxy S8 / S9 / S8 Plus / S9 Plus / Qaphela i-8 / Qaphela i-9, i-Dell XPS 15 / XPS 13, i-Chromebook, i-Chromebook Pixel namanye amadivayisi ane-USB-C (enomsebenzi wokukhipha ividiyo) noma i-Thunderbolt 3 itheku.
Ikhebula ukuhambisana kwendawo yonke. Iyahambisana nama-laptops nezingcingo ezi-smart ezifakwe amachweba weThunderbolt 3, noma amachweba we-USB-C asekela i-DisplayPort Alternate Mode, kufaka phakathi iMacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016, 12-inch MacBook 2017/2016/2015, MacBook Air 2020/2019/2018, i
Ama-connexions akhiqiza ikhebula le-USB elinolwazi oluningi ngaphezu kweminyaka eyi-17years. Le USB 3.0 A kuya ku-C ivumelanisa ngesivinini esikhulu, ukushaja ngejubane nokuqina okungenakuqhathaniswa. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Sigunyazwe yinhlangano ye-USB. Zonke izintambo zikhiqizwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001-2015 kanye ne-100% ngaphakathi endlini evivinywa ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula le-USB abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula le-USB esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.